I-Trajano Trilogy, nguSantiago Posteguillo. Kwiinkulungwane ezili-19 emva kokufa komlawuli omkhulu waseSpain. | Uncwadi lwangoku
Kwakuphakathi kwe- Nge-9 ka-Agasti ne-10, ngo-AD 117. C. Wayebuyela eRoma emva imikhankaso yokugqibela emkhosini eMpuma emva ukwandisa ubukhosi ukuya kumda wayo omkhulu. Emva kwakhe, obu bukhosi abuzange bube bukhulu kwaye bunamandla kwakhona. Kudala evakalelwa kakubi, kodwa kwakule nduli indala Selina (kwiTurkey yanamhlanje) apho wabona khona Ukutshona kwelanga kokugqibela. un stroke Wayemlumkisa de wayifikelela. Kukwathiwa abanye Isandla esikhohlisayo .
Kodwa nangayiphi na imeko, UMarco Ulpio Trajano, USevillian wase-Italica, Umlawuli wokuqala waseSpain eRoma, lashiya ilifa elinjalo, kwaye lisakhunjulwa njenge omnye wabalawuli abakhulu kwimbali. Mhlawumbi eyona inkulu. Oko kusixelele (kwaye ngokuqinisekileyo kusenza sikholwe) USantiago Posteguillo kule trilogy entle kakhulu. Ke, ngozuko lweTrajan enkulu, siphonononga iinoveli ezintathu ezinde nezinamandla Yibumbe kwaye kufuneka bacelwe ukuba bafunde kumaziko nakwiiyunivesithi.
2 Ababulali boMlawuli
3 Ubuninzi besekisi
4 Umkhosi olahlekileyo
5 Ukukhangela ingcwaba likaTrajan
6 Imuchas Gracias
Ndizifunde zombini Iitrilogies zikaSantiago Posteguillo: zezo USpipio waseAfrika (kwakhona engaqhelekanga) kwaye le isuka UTrajan. Kodwa yayingaphambi kukaTrajan. Kwaye, nangona ndithatha umnqwazi wam kubo bobabini, Ungumlawuli waseSevillian onenxalenye elungileyo Ukuncoma kwam (Kwaye nentliziyo yam). Mhlawumbi kungenxa yokuba ndivela apha, ndisuka kwi- IHispania apho uSpipio noHannibal babenexesha elimnandi kudala.
Kwaye ndingumkhosi we-Oretan othobekileyo, ofunda kunye nesiLatin esikhohlakeleyo kunye nesiqhwala, kuyo yonke iminyaka kunye neenkulungwane Bendihleli nomntu wonke kumgca wangaphambili wokulwa. Ndibe likhoboka UKumkanikazi waseRoma no-Xeres, uGladiatrix, uDacian kunye neNkosazana yasePatihian, igorha leSarmatia kunye neVestal virginal; kwaye ndithandile, ndathanda, ndangcatsha, ndathiya, ndababulala ndaza ndalawula zonke.
Mhlawumbi njengomfazi Ndidinga ukoyisa uTrajan kuba, ukongeza ekwabelaneni ngomhla wokuzalwa kwakhe kunye nokukhulelwa kwam, nam sabelana ngokuthanda okufanayo kubadlali ababonakala bekhangeleka kunye nabafana abahle. Ke ndiye ndaphumelela ngokuba ngumdlali weqonga onomtsalane kunye nenkosana yexeshana njengelirhintyelayo njengokuba inobuqhophololo.
La Ubuntwana bukaTrajan kunye nolutsha ziphawulwe ngegama elikhulu likayise kwaye ubuhlobo bakhe noCneo Pompeyo Longinos, oyena mhlobo wakho uthembekileyo. Emva kwexesha, uTrajan wakhokela umkhosi emkhosini nge Germania xa bamcela ukuba athathe inxaxheba Iyelenqe lokuphela naloo mlawuli uphambene negazi owayenguye UDomitian Flavio. UDomitian wafikelela kwimida engalindelekanga de paranoia kunye nenkohlakalo Ukuthwala igazi elifanayo noyise uVespasian okanye umntakwabo uTitus, ophumelele kakhulu eRoma.
Kwaye ndaya kuqala kunye UVespasian noTitus, kunye noTrajan utata, ukuvavanya zombini ukuziphendulela ngokuqatha kwamaYuda ngokuchasene nemikhosi yawo IYerusalem. Nam ndibonile izicwangciso zelo gcisa lokwakha ngubani UApollodorus waseDamasko Ukugqiba ukuphakamisa Indawo yemidlalo yeFlavian ngembeko yolo loyiso.
Ndiqhubeke noApolodoro saya Yakha ibhulorho enkulu phezu kweDanube xa uTrajan Jr., ngoku umlawuli, wasibiza ukuba sehlise umsi kwi dacian Kumkani Yiyeke phantsi. Sayifumana kanye kwaye sasinomkhulu. Kodwa nini baqweqwedisa kwilifa lethu elinesibindi nelithandwa kakhulu uCneo Pompeyo Longinus, owazincama washiya izandla zikaTrajan zikhululekile ukuba zisebenze, asisabonisi imfesane (kodwa sibonisa zonke iinyembezi zelahleko yakhe). Siyatshayela Sarmizegetusa kwaye siyamhlukumeza uDecébalo de sifumane intloko.
Imibhiyozo engakumbi Imidyarho yabaqhubi beenqwelo ezingalibalekiyo kwiCircus Maximus ezingalibalekiyo ngakumbi amahashe ngokukhawuleza njengokukhanya, naumachias enomtsalane... Kwaye ke liinzipho gladiator. Ngoba nam khange ndohlukane nencinci UMarcio, Waziwa kwinoveli yokuqala, kwaye apha sele ikho enkulu kunazo zonke. Ne kwakhona, ngaphandle kokuyifuna okanye ukungayifuni, Ndathatha inxaxheba kumayelenqe ukubulala uTrajan kwaye kamva amncede ukuthunyelwa ngasese endiyenzileyo ndisebenza ngokukuko nangokuzimisela okufanayo noMarcio de kwasekupheleni, kuloo ndawo ikude yehlabathi apho wafika nosapho lwakhe oluhle.
El Ukuvuthwa kwesidanga senkosi kwi-cushion ezine kunye nolwakhiwo lwee-beat ezimbini, iinkcazo, isitayile, ubunzulu kunye imvakalelo ngobuninzi nangaphandle komda. Ngenxa yokuba ekuqaleni Ndangena kwimikhosi ye UMarco Licinius Crassus kwaye ndasinda kwintlekele ka UCarras. Kodwa ndigqibele ngokwenza u uhambo olumangalisayo ukuya esiphelweni sehlabathi kunye neqabane kwiingalo ze ICorduba nomthetheli-khulu wethu ongenakoyiswa Utywala, de ICarthage Nova. Okanye ukubona ukuba ngubani othi iCagagagena kunye neCordoba, kunye nesibini, abanakuma emnyango we udonga olungapheliyo nolukude emva kokuchitha yonke into edlulayo isilwa namaParti, amaIndiya, amaHuns noHan.
Y okwesibini ndaqhubeka noTrajano. Ndasinda kuloo ntshabalalo inyikima kwa-Antiyokwe ngo-115 AD C., ndaya ku Babilonia kwaye wawela i ITigrisi ne-Ewufrathe Ngenye ibhulorho eyilwe yingqondi ka-Apollodorus. Andiyi kulibala ukungqinga kunye nokoyisa UCesiphon emva kokubona ubugwala bendiza yenkohlakalo I-Parthian king Osroes. Andiyi kulibala ukuba ndithathe itrone yakhe yegolide, okanye isiphelo sakhe esifanelekileyo ezandleni zendlalifa efanelekileyo yobukumkani bakhe.
Y Andiyi kulibala ukungakwazi ukuqhubeka ngenxa yesifo esibuhlungu, Nguye kuphela owancama waphelisa iphupha likaTrajan. Ubuncinci ngaloo ndlela akazange abone ukuba kwenzeka ntoni emva koko ngempumelelo engaka, amadoda nabahlobo bakhe. Kuba Ndiza kuhlala ndilahleka (ndilila), ngaphandle kukaLonginus, Kwintloko eyoyikekayo yamahashe aseNumidian uLucio Quieto. Ngamana bonke oothixo bangaba naye kobuqaqawuli bakhe obungunaphakade kunye noTrajan ngenkalipho yakhe enkulu, imbeko kunye nesidima.
Ukukhangela ingcwaba likaTrajan
IPosteguillo igqibezela umsebenzi ezimbalwa Amaphepha angama-40 malunga nohambo yeyakhe into ayenzileyo ukuya eTurkey ukutyelela isikhumbuzo somngcwabo eSelina (ngoku eyiGazipasa). Khumbula ukuba Uthuthu lukaTrajan (ukuba kamva Baye balahleka) zasiwa eRoma zangcwatywa phantsi kwezidumileyo Ikholamu I-Trajano, umsebenzi we-Apollodorus enkulu.
A USantiago Posteguillo. Eyakhe Ulwazi olukhulu lokuzonwabisa, amaxwebhu kunye nokubalisa de yi umbono ocacileyo wefresco yembali engenakuthelekiswa nanto. Y ngokubuyisela ebomini loo madoda nabafazi abenze imbali. Kwiphepha, inkumbulo yenkumbulo yakhe ayinakufa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » I-Trajano Trilogy, nguSantiago Posteguillo. Kwiinkulungwane ezili-19 emva kokufa komlawuli omkhulu waseSpain.